Statin'ny Marketing amin'ny finday 25 ho an'ny taona 2014 izay Martech Zone
Alatsinainy, May 19, 2014 Douglas Karr
Manana asa hatao amin'ny fandaminana finday izahay ary manamboatra fanovana isam-bolana hanatsarana ny fomba fisehoan'ny tranonkalantsika. Tsy mora izany rehetra izany raha ny fahitana ny haben'ny viewports amin'ny fitaovana, fa ny fitomboan'ny fivezivezena amin'ny finday dia mitohy mihoatra ny fitomboan'ny birao ka fantatray fa fampiasam-bola lehibe izany. Tsy misy mahasosotra kokoa noho ny fikitihana ny rohy iray ary ny fipetrahana amin'ny pejy iray izay tsy azonao vakiana rehefa eo amin'ny findainao na amin'ny takelakao ianao.
Antsoy ny 2014 taona tena iharan'ny fivezivezena eo amin'ny orinasa. Tena mila mijery ny paikadim-barotra amin'ny finday ny fikambanana mba hanitarana ny tratrany. Amin'ity fananganana haingana ny BYOD, mitombo ny fahafaha-manao ho an'ireo mpivarotra sy mpamatsy teknolojia. Ny fanangonana fitaovana samihafa toy ny computing cloud sy angona lehibe dia manampy ny orinasa hahazo tombony amin'ny fomba vaovao mifantoka amin'ny fivezivezena. WebDAM
Ny varotra finday any Etazonia dia eo am-piomanana hamokatra $ 400 miliara amin'ny varotra amin'ny 2015, tafakatra $ 139 miliara amin'ny 2012. Raha mbola tsy nieritreritra ny paikadinao ianao dia efa very toerana ary mila mampiditra tranokala finday, fampiharana, fandefasan-kafatra an-tsoratra, ary ny fampiroboroboana mba hisarihana ny sain'ny mpijery na ny mpanjifa rehefa mihazakazaka izy ireo. Fampahalalana farany an'ny WebDAM manolotra antontan'isa mahaliana 25 momba ny fironana ankehitriny amin'ny finday, ny anjaran'ny tsenan'ny finday, ny fitomboan'ny fampiasana finday sy maro hafa.
Tags: 2014statistikan'ny marketing amin'ny findaystatistikan'ny marketing amin'ny findaystatistikan'ny findaystatistika finday
Nanazava ny fanodinana carte de crédit sy ny fizahana finday
May 20, 2014 amin'ny 11: 42 AM
Salama Douglas, infografika mahafinaritra. Azo antoka fa hisy fiantraikany amin'ny mpivarotra maro sy ny paikadin'izy ireo izany, satria nanjary zava-dehibe tokoa ny anjara asan'ny marketing amin'ny finday, ary ireto ny tarehimarika manaporofo izany.